မြို့သား လီချင်စတိန်း၏ ပွဲကျင်းပအလွန် ချစ်. ဖြစ်ကြသည်။ ဒီသေးငယ်တဲ့တိုင်းပြည်မှာတော့သမားရိုးကျ (စသည်တို့ကိုနှစ်သစ်ကူး, အီစတာ) အပြင်၌၎င်း, ရှေးခေတ်နှင့်ဆက်နွှယ်နေသောအရာ "သူတို့" ရုံးပိတ်ရက်, ဆင်နွှဲ အစဉ်အလာ - သစ်ကိုရာသီ, ဘာသာရေးသို့မဟုတ်ဒဏ္ဍာရီများထွန်း။
အဓိကရုံးပိတ်ရက် - Assumption နေ့ - လီချင်စတိန်းသြဂုတ်လ 15 ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ခင်မှာ Prince ရဲတိုက် နှင့်မြို့စတုရန်းအားလုံးနေထိုင်သူများ, သံတမန်များနှင့်ခရီးသွားဧည့်သွားကြသည်။ ဒါဟာဧကရာဇ်နှင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏အားလပ်ရက်စွမ်းဆောင်ရည်ဖွင့်လှစ်။ သူတို့ရဲ့မိန့်ခွန်းပြီးနောက်နိုင်ငံတော်သီချင်းအသံများနှင့်လည်း choir အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ဤသည်နေ့ရက်တွင်, အားလုံးအခမဲ့သကြားလုံးဖြန့်ဝေနှင့်ပြီးစီးပေါ်မှာအကြီးအမီးရှူးမီးပန်းများ display ရဲ့ပွဲကျင်းပခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
လီချင်စတိန်းနေထိုင်သူများ - အလွန်ဘာသာရေးကလူ။ ဒီပြည်နယ်အားလပ်ရက်များ၏ပြက္ခဒိန်သည်သန့်ရှင်းသောနေ့ရကျရှိပါတယျ:
။2ဇန်နဝါရီ - စိန့် Berthold ၏နေ့။
Candlemas - ဖေဖော်ဝါရီလ2။
။ အသက် 19 မတ်လ - စိန့်ယောသပ်၏ပွဲတော်။
စိန့်စတီဖင်ရဲ့နေ့ - ။ 26 ဒီဇင်ဘာလ။
ဥပဒေ အဘယ်သူမျှမ Lichtenstein အားလပ်ရက်များတွင်အလုပ်လုပ်ဖော်ပြထားသည်။ မြို့များ, အဓိကလမ်းများစိမ်းလန်းစိုပြေပွဲတော်များ, ခုန်စီစဉ်ပေါ်တွင်သီချင်းဆို။ အသင်းတော်၌, နံနက်ယံ၌ခြောက်လကတည်းကအားလုံးလုံးဝပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်အတွက် Mass ၏ပဌနာ, ဖြုန်းနေကြတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအားလပ်ရက်များတွင်မကျေနပ်မှုများနှင့်သကြားလုံးအောင်နောင်တနိမိတ်လက္ခဏာ၏ဆွေမျိုးသားချင်းများအနေဖြင့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းအဘို့အမေးရန်လက်ခံခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်။
များစွာသောရိုးရာပွဲတော်များတို့တွင်အကြိုက်ဆုံးနေထိုင်သူများ၏လီချင်စတိန်းတဦးတည်း Funken und Kyuahlizontag ဖြစ်လာခဲ့သည် - အချိန်သည်ဆောင်းကာလကိုချွတ်။ ဒါဟာအီစတာမတိုင်မီဥပုသ်၏ပထမတနင်္ဂနွေကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ ညဦးအသုံးပြုပုံလမ်းပေါ်မှာက၎င်း၏ကလူသွားနှင့်မီးအားမီးသတ်မှတ်ထားသည်။ အသံသီချင်းတွေကိုစီတန်းနှင့်အတူထိုအမီးနှင့်အတူလမ်းများမှတဆင့်သွားလာ။ ဒီရိုးရာဓလေ့မှောင်မိုက်တပ်ဖွဲ့များ banishes ယုံကြည်ကြသည်။ လမ်းများများ pass, "သန့်ရှင်းစေခြင်း" နောက်, လူများတို့သည်စင်မြင့်သွားကြသည်နှင့်ပိရမစ်၏ပုံစံအတွက်မီးညှိ။ အဆိုပါပိရမစ်များ၏ထိပ်တွင်မှောင်မိုက်တပ်ဖွဲ့တွေကောက်ရိုး scarecrow စုန်းသွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ မီးလျှံမီးလောင်ကျွမ်းသောအခါ, အခမ်းအနားအပေါငျးတို့သသင်တန်းသားများကို "ချိုမြိန်စားပွဲ" ကိုသွားနေကြပါတယ်။ စတုဂံသကြားလုံး - အဓိကအားဖြင့်ဒီနေ့၌ရယူထားသော Kyuali ဖြစ်လာသည်။
လီချင်စတိန်းအတွက်နောက်ထပ်အကြိုက်ဆုံးအားလပ်ရက် Fasnacht ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဤသည်ဥပုသ်၏အစအဦးရှေ့တော်၌ထိုကြာသပတေးနေ့မှာကျင်းပသောပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းသားများကိုဂီတ Gugter မှအယူမှားဝတ်စုံနှင့်မျက်နှာဖုံးများနှင့်ကခုန်သောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်။ မြို့၏အဓိကစတုရန်းတွင်တစ်ဦးဝတ်စုံချီတက်ပွဲစည်းရုံး။
လီချင်စတိန်း၏နေထိုင်သူများအဘို့အရေးကြီးအားလပ်ရက် Alpabfart ဖြစ်ခဲ့သည်။ မြေပြင်သို့ပြန်သောတောင်ပေါ်အရပ်၌သိုးစုများနှင့်အတူ, နှင်းခဲတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းသောအခါနှောင်းပိုင်းတွင်ဆောင်းဦးရာသီအတွက်။ ဤသည်နေ့ရက်သည်ကျက်စားရာအဘို့နွေရာသီရာသီ၏ပိတ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ မိုက်မဲရရှိသွားတဲ့အခါညနေပိုင်းတွင်, ရွာသားများသိုးထိန်းနှင့်သူတို့၏သိုးစုကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ထွက်လာကြ။ လည်ပင်းပေါ်မှာသစ်သားနှလုံးသားများနှင့်ခေါင်းလောင်းဆွဲထားဦးချိုတို့၌နွားနှင့်နွားတွေထိုနေ့ရက်သည်။ စကားမစပ်ဤ "Widgets တွေ" ကလူကြိုက်အများဆုံး၏တဦးတည်းရဲ့အက, အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်များမှာဝယ်ယူနိုင်ပါသည် လီချင်စတိန်းကနေအမှတ်တရပစ္စည်းများ ။
အရေအတွက်က7အဘယျသို့သနည်း
ပန်းသီးနှင့်အနက်ရောင် chokeberry ကနေယို«အရှေ့တိုင်းဆန်အစည်းအဝေး»
တစ်သွန်း-သံရေချိုး update လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ငါးမွေးကန် crayfish - အကြောင်းအရာအမျိုးအစားများနှင့်အင်္ဂါရပ်
Chandler Riggs နှင့်သူ၏ရည်းစား
ဖက်ရှင် 2014 Caps
Hypochondria - လက္ခဏာများ
Serous နှောက်အမြှေးရောင် - ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး
Encephalopathy တန်း 3
ငှက်ပျောကော့တေး - နို့, ရေခဲမုန့်သို့မဟုတ်အရက်နှင့်အတူအရသာသောက်ချက်ပြုတ်နည်းများ